iPhone မှ Mac သို့ ဓာတ်ပုံများ လွှဲပြောင်းနည်း ငါ mac ကပါ။
ဓာတ်ပုံများကို iPhone မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းနည်း
Soy de Mac မှ macOS ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းကဲ့သို့ iOS ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုစီကို ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အမြဲအကြံပြုလိုပါသည်။ scratch install လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင်ထည့်သွင်းပြီးသောဗားရှင်းမှစက်ပစ္စည်းကိုတိုက်ရိုက်မွမ်းမံခြင်းမပြုပါနှင့်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ကြာမြင့်ပြီး အပလီကေးရှင်းများကို ထပ်မံထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad နှင့် Mac ပထမနေ့ကဲ့သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ iPhone မှာဆိုရင် iPhone မှာပါတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ဘာဖြစ်မလဲ။ ဓါတ်ပုံများကို iPhone မှ Mac သို့ မည်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်မည်နည်း။
Mac ဆိုရင်၊ ပုံတွေအားလုံးကို အရန်သိမ်းဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက ကောင်းတယ်။ ပြင်ပ hard drive ကိုချိတ်ဆက်ပြီး အကြောင်းအရာအားလုံးကို ကော်ပီကူးပါ။ Mac မှာ သိမ်းထားတာ။
ဒါပေမယ့် iPhone ဒါမှမဟုတ် iPad ဆိုရင်၊ အရာတွေက လုံးဝကွဲပြားပါတယ်။. ထို့ထက်ပင်၊ ၎င်းသည် Mac ဖြစ်ပါက၊ Windows တွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် များစွာရိုးရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ iPhone မှ ဓာတ်ပုံများကို Mac သို့ လွှဲပြောင်းနည်း သိလိုပါက ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးဘဲ WhatsApp မှဓာတ်ပုံများပေးပို့နည်း
2 Photos အက်ပ်ဖြင့်
4.1 စာ Drop
အဆိုပါနည်းလမ်း ပိုရိုးရှင်း၊ ပိုမြန်ပြီး စျေးသက်သာတယ်။ ဓါတ်ပုံများကို iPhone မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းရန် Apple ၏ AirDrop နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ AirDrop သည် ကျွန်ုပ်တို့အား Apple စက်ပစ္စည်းများအကြား မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို လွှဲပြောင်းနိုင်သရွေ့ နှစ်ခုလုံး တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီနည်းပညာ Wi-Fi (ရနိုင်လျှင်) နှင့် bluetooth ကိုအသုံးပြုသည်။ အကြောင်းအရာကို ပေးပို့ရန်၊ ထို့ကြောင့် လွှဲပြောင်းမှုအမြန်နှုန်းသည် အလွန်မြင့်မားသည်။
ဒါဟာအကြံပြုသည် ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို ဘလောက်များဖြင့် ပေးပို့ပါ။ Mac နဲ့ iPhone နှစ်ခုလုံးကို ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားချင်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ဘာကိုမှ လွှဲပြောင်းမပေးပါနဲ့။
ဒီနည်းပညာကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အသုံးပြုလာခဲ့ပေမယ့် အစပိုင်းမှာတော့ Mac အတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Apple က ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို iPhone မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှ ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို Mac သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် AirDrop ကို အသုံးပြုပါ။ iOS 8 ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်ပြီး၊
iPhone- iPhone5သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း
iPad- iPad 4th မျိုးဆက် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း
iPad Pro- iPad Pro ပထမမျိုးဆက် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း
iPad Mini- iPad Mini ပထမမျိုးဆက် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း
iPod Touch- iPod Touch 5th မျိုးဆက် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်း
ဒါ့ပြင် iMac မှာ ရရှိမယ့် အကြောင်းအရာ၊ OS X Yosemite 10.10 ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်ပြီး-
MacBook Air သည် 2012 နှစ်လယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
MacBook Pro သည် 2012 နှစ်လယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
iMac သည် 2012 နှစ်လယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
Mac Mini သည် 2012 နှစ်လယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
Mac Pro သည် 2013 နှစ်လယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
သင့်စက်ပစ္စည်းသည် အနိမ့်ဆုံး iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးထားသော Mac များထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်ပါက၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ AirDrop နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင်၏ iPhone မှ ဓာတ်ပုံများကို Mac သို့ လွှဲပြောင်းရန်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် iCloud Drive တွင် သိုလှောင်မှုနေရာကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလျှင်၊ ငါတို့ backup တစ်ခုလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ပုံများအားလုံးကို Apple cloud တွင် သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်၊ Photos အပလီကေးရှင်းကြောင့် အဆိုပါအကြောင်းအရာအားလုံးကို Mac မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Apple က သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် ပေးထားသည့်5GB ထက် ကျော်လွန်သည့် iCloud space အပိုမရှိပါက၊ သင်သည် သင်၏ Mac ရှိ Photos အက်ပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို တင်သွင်းပါ။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို မဆောင်ရွက်ခင်မှာ ဒါကို စစ်ဆေးရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နေရာအလုံအလောက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏သိုလှောင်မှုယူနစ်တွင်။
သင့် Mac ရှိ Photos အက်ပ်ကို အသုံးပြုရန် iPhone ဓာတ်ပုံများကိုရွှေ့ပါ။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone၊ iPad ဒါမှမဟုတ် iPod touch ကို Mac နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ USB အားသွင်းကြိုးကို အသုံးပြု.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် application ကိုဖွင့်ပါ။ ဓာတ်ပုံများ Mac ပေါ်မှာ။
Photos အပလီကေးရှင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်သည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို ပြသပါမည်။ ဓာတ်ပုံများကိုတင်သွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဗီဒီယိုများ။
ဤစခရင်ကို မပြသပါက၊ ဘယ်ဘက်ကော်လံရှိ Mac နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းကို နှိပ်ပါ။
ဆက်လက်၍ အတည်ပြုရန်၊ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch ၏ ပိုင်ရှင်များ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်ကို ကူးယူလိုသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စက်ပစ္စည်း၏ လော့ခ်ဖွင့်ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုချင်တာရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကို မေးပါ။ အဲဒီအသင်းကို ယုံကြည်ပါ။. ဤမေးခွန်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Trust ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် အဖြေပေးပါသည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ အကြောင်းအရာကို တင်သွင်းလိုသည့် ဖိုဒါကို ရွေးပါ။ Import ၏ညာဘက်ရှိ drop-down ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှ၊
သင့်ဓာတ်ပုံများကို သီးခြား hard drive တွင် သိမ်းဆည်းလိုပါက Photos အက်ပ်ကို အားမကိုးဘဲ၊ အကြောင်းအရာကို Photo Library သို့ တင်သွင်းရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ (မူလရွေးချယ်ခွင့်) သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ရှိသော လမ်းညွှန်တစ်ခုသို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပ hard drive တစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ကူးယူနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုအားလုံးကို ရွေးရပါမယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ခါမျှ မလုပ်ဖူးပါက၊ ကိုနှိပ်ပါ။ ဓာတ်ပုံအသစ်များအားလုံးကိုတင်သွင်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်ရှိ ပုံများနှင့် ဓာတ်ပုံများ သိမ်းပိုက်ထားသော စုစုပေါင်းနေရာပေါ်မူတည်၍၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ပို သို့မဟုတ် နည်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် Mac သည် ဟောင်းနေပါသည်။ Photos အက်ပ်သည် ထိုအင်္ဂါရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ၊ သို့မဟုတ် သင်သည် ဤအက်ပ်ကို မသုံးချင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အက်ပ်သို့လှည့်နိုင်သည်။ iFunbox.
iFunbox က ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသော အကြောင်းအရာအားလုံးကို ထုတ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ၎င်းသည် ဖိုင်ရှာဖွေသူကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကို Mac နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ဖွင့်ပြီး ဘယ်ကော်လံတွင်၊ ကင်မရာမီနူးကို ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ရွေးချယ်မှု3ခုသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရုပ်ပုံများနှင့် ဓာတ်ပုံများ အများအပြားကို လွှဲပြောင်းပါ။ iOS /iPadOS စက်မှ Mac သို့။
သို့သော်သင်သာလိုချင်လျှင် ပုံအနည်းငယ်ကို လွှဲပြောင်းပါ။ အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကို သင်အသုံးမပြုချင်ပါ၊ ဤနေရာတွင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် iCloud တွင် စာချုပ်ချုပ်ထားသော သိုလှောင်မှုနေရာမရှိသော်လည်း Apple သည် ကျွန်ုပ်တို့အား iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှ ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို Mac သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းသို့ လွှဲပြောင်းရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ Mail Drop လုပ်ဆောင်ချက်မှတဆင့်။
ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် Mail အပလီကေးရှင်းမှတဆင့် ကြီးမားသောဖိုင်များကို ပေးပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စက်၏ သို့သော် ၎င်းတို့ကို မေးလ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ပေးပို့မည့်အစား ၎င်းတို့ကို Apple cloud တွင် အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး အလိုအလျောက် Apple မှ ထိုအကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လင့်ခ်တစ်ခု ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
MailDrop ကို အသုံးပြု၍ မျှဝေထားသော ဖိုင်များအားလုံး ရက် 30 အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။. ဤစနစ်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် Apple ID အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်အကောင့်မှတစ်ဆင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Mac တစ်ခုသို့ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ ပေးပို့ရန် နောက်ထပ် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ခွင့်ကို လူကြိုက်များသော WeTransfer ကြီးမားသော ဖိုင်ပေးပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုတွင် တွေ့နိုင်သည်။ iOS အတွက် ရရှိနိုင်သော အပလီကေးရှင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အခြားဖိုင်အမျိုးအစားများကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အများဆုံး2GB နှင့်။
လျှောက်လွှာဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေလိုသော အကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်ပြီး၊ လက်ခံသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပြီး အကြောင်းအရာကို ပေးပို့ပါသည်။
Mail Drop ရွေးချယ်မှုကဲ့သို့ပင်၊ ဤရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ရွေးချယ်မှုများထက် များစွာနှေးကွေးပါသည်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » ဓာတ်ပုံများကို iPhone မှ Mac သို့လွှဲပြောင်းနည်း
Macတိုင်းတွင် စံထားပြီးဖြစ်သော “Image Capture” ကို သင်ချန်ထားခဲ့ရပြီး စကင်နာများအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ Mac နဲ့ မိုဘိုင်းလ်ချိတ်ဆက်ပြီး အားသွင်းသူတွေအတွက်ပါ။
မင်္ဂလာပါ ဆောင်းပါးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး iPhone (12 pro max) ကို Imac (M1) နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် "တင်သွင်းရန်အတွက် ဓာတ်ပုံများကို တင်နေသည်..." ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့သည် မတင်တော့ပါ။ အင်တာနက်မှာတွေ့ဖူးတယ်၊ လူတွေဘာဖြစ်မလဲ၊ သူတို့ပေးတဲ့အဖြေက လေယာဉ်ပေါ်တင်၊ ထားခဲ့၊ ပြန်ဝင်၊ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထား... တစ်ခါတလေတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ တခြားအချိန်တွေမှာ အဆင်မပြေဘူး။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ၊ ပိုလက်တွေ့ကျတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းကို တစ်ယောက်ယောက် သိပါသလား။ ကျေးဇူးပါ။
“အကယ်၍ iCloud Drive တွင် သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလျှင်” နှင့် iCloud တွင် Photos ကို activated လုပ်ထားလျှင် နှစ်ခုလုံးမပါသောကြောင့်…
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဓာတ်ပုံများကို AirDrop မှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပါ၊ ၎င်းသည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်အား ပြောပြပါ။
ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်အရာမှာ "မွမ်းမံမွမ်းမံခြင်းမပြုဘဲ တင်ပို့ခြင်း" သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်... ၎င်းသည် ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ရက်စွဲကို ဖယ်ရှားပြီး အသစ်တစ်ခုကို တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို သင့်ထံ တင်ပို့မည်ဖြစ်ပါသည် ‍♂️ ထိုသို့သောပုံစံဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် အင်ဂျင်နီယာက မည်သို့ယူဆထားသည်ကို မသိသည့်အရာဖြစ်သည် (ထင်ရှားသည်မှာ ၎င်းသည် Mac ပေါ်ရှိ Photos အက်ပ်ကို စင့်ခ်လုပ်ထားသည့်ရက်စွဲဖြစ်သည်၊ ဓာတ်ပုံ - Apple Care တွင် အနည်းဆုံး ရှင်းပြထားသည်)။ ဆိုလိုတာက သည်းမခံနိုင်ဘူး။
UK Apple Stores အချို့သည် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပုံရသည်။
ကျောင်းသားဝယ်ယူမှုအတွက် Apple သည် Unidays တရားဝင်မှုကို ဖယ်ရှားသည်။